ब्राजिलको कारागारमा ४२ कैदी मृत फेला – MeroOnline Khabar
ब्राजिलको कारागारमा ४२ कैदी मृत फेला
काठमाडौंः उत्तरी ब्राजिलस्थित छुट्टाछुट्टै जेलमा ४२ जना कैदी मृत फेला परेका छन् ।
अमेजनस राज्यको एक कारागारमा समूहबीचको झडपमा १५ जना कैदी मारिएको एक दिनपछि यो घटनाबारे विवरण सार्वजनिक भएको हो ।
अक्सिजन अभावले श्वासप्रश्वासमा अवरोध भई कैदीहरुको मृत्यु भएको अमेजन राज्यको प्रिजन एजेन्सीले जनाएको छ ।
← राजनीतिमा खासै अनुभव नभएको चंद्राणी बनिन् भारतकी सबैभन्दा कान्छी सांसद
भाग्यमानी कसरी बन्ने? →
अपराधि नहुँदा नेदरल्याण्डको कारागार बन्द हुने अवस्थामा
चुनावको मतगणना हुनुअघि किन गुफाभित्र पसे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ? ध्यानमा बसेको तस्बिर बन्यो भाइरल
खुसीको खबर सक्दो सेयर गरौं “फिर्ता हुने भयो सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली जमिन” यसरी भयो बेलायती मन्त्रीको ध्यानाकर्षण